Kooxda Daacish oo sheegatay dil dhawaan loo geystay sarkaal ka tirsanaa ciidanka NISA – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kooxda Daacish oo sheegatay dil dhawaan loo geystay sarkaal ka tirsanaa ciidanka NISA
War lagu baahiyay warbaahinta taabacsan kooxda Daacish ee Al-Acmaaq ayaa lagu sheegay in dagaalyahano ka tirsan kooxdeeda ay magaalada Muqdisho dhawaan ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
Sarkaalkaasi la dilay oo lagu magacaabi jiray Muxiyadiin Amadi ayaa ka dhacay degmada Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho, waxaana la dilay 20-kii bishaan aynu ku jirno ee Maarso.
Illaa iyo haatan ma jirto cid rasmi ah oo xaqiijisay falkaan iyo jiritaankiisa, iyadoona sidoo kale aanay jirin hadal kasoo baxay taliska NISA iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kaga hadlayaan dilkaan ay kooxda Daacish ku sheegteen inay u geysteeen sarkaal ka tirsanaa NISA.
Waa markii ugu horeeysay oo ay ururka Daacish ee ka dagaalanta gobolka Bari ay fal ceynkaan oo kale ah ku sheegtaan inay iyaga ka dambeeyaan.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan dilalka qorsheeysan iyo qaraxyadda ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa waxaa sheegta Xarakada Al-shabaab, waana markii ugu horeeysay oo ay kooxda Daacish ee ka dagaalanta gobolka Bari, gaar ahaan Buuraha Galgala sheegtaan in dil ka dhacay Muqdisho ay iyaga ka dambeeyeen.